Waa kuma ciyaaryahanka ay kooxda Real Madrid qeyb uga dhigayso bisha Janaayo soo xero-gelinta Paul Pogba? – Gool FM
Waa kuma ciyaaryahanka ay kooxda Real Madrid qeyb uga dhigayso bisha Janaayo soo xero-gelinta Paul Pogba?
(Madrid) 12 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay ku wargelisay Real Madrid inay doonayso Toni Kroos in qeyb looga dhigo heshiis kasta oo uu Paul Pogba ku aadayo dhinaca kooxda reer Spain suuqa kala iibsiga xiddigaha ee bisha Janaayo.
Real Madrid ayaa si xoog leh loola xiriirinayey Pogba intii lagu guda jiray suuqii xagaaga, laakiin kooxda reer Spain ayaa awoodi weysay inay bixiso qiimaha ay laacibkan ku doonaysay kooxda 20-ka goor ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska.
Sida uu warinayso Suxufiga Spanish-ka ah ee Eduardo Inda, Los Blancos ayaa markale isku dayi doonta bisha Janaayo soo xero gelinta xiddiga ku guuleystay koobka Adduunka sanadkii 2018, Kroos ayaana fure u noqon kara heshiiska.
Inda ayaa sheegay in Red Devils ay isku dayday inay la soo saxiixato xiddigan reer Jarmal intii lagu jiray suuqii xagaaga, iyagoo ku dalbatay adduun dhan 67 milyan oo gini 29-sano jirkan, kaasoo heshiis waqti dheer ah qalinka ugu duugay kooxda ka dhisan garoonka Bernabeu bishii May.
“Zinedine Zidane wuxuu leeyahay bartilmaameed, kaas oo wali ah Pogba,” ayuu Inda u sheegay El Chiringuito TV.
“Tababaraha reer France waa shaqsi fikirkiisu uu ka go’an yahay, waxa uuna ku adkeysanayaa Paul, waxay isku dayi doonaan bisha Janaayo, waxaana jiray xiriirkii uu horay ula yeeshay Man United.
“Wadahadallada u dhaxeeya ergooyinka Madrid iyo Man United ayaa wali socda, magac ayaa lagu soo bandhigay waa Toni Kroos, Man United waxay isku dayday inay la soo saxiixato Toni Kroos xagaagan, waxaana ay u soo bandhigtay 75 milyan oo euro oo u dhiganta 67 milyan oo gini, taasina waxa ay dhalisay in dib loo cusbooneysiiyo heshiiskiisa kooxda cad-cadka.” ayuu hadalkiisa ku daray Suxufiga Eduardo Inda.
Labada kooxaha Real Madrid iyo Manchester United ayaa ku dhibtooday natiijooyinka liita iyo qaab ciyaareed xun bilowga xilli ciyaareedkan 2019-20.
Waa kee ciyaaryahanka ku sugan Kooxda Chelsea oo ay doonayaan Hazard iyo Courtois inay markale kula midoobaan Real Madrid?